Ogaden News Agency (ONA) – Shir Togba /Dammam lagu qabtay iyo mudane Cadaani oo hadal lagu diirsaday ka jeediyay
Shir Togba /Dammam lagu qabtay iyo mudane Cadaani oo hadal lagu diirsaday ka jeediyay
Posted by ONA Admin	/ January 21, 2012
Dammam (Togba)- Shalay oy taariikhdu ahayd 20/01/2012 ayaa waxaa shir qurux badan oo wacyi galin ahi uu ka dhacay xaafada Togba ee magaalada Dammam ee ku taala bariga Sacuudi carabiya. Shirkan oo ahaa mid yididiilo xambaarsan oo ay ka soo qayb galeen dhamaan jaaliyada somalida Ogadeniya ee xaafada Togba ayaa waxaa khadka telefoonka kaga qayb galay mudane Cadaani Hiirgoome.
Mudane Cadaani ayaa wuxuu halkaas ka soo jeediyey hadal dheer oo dadkii goobta fadhiyey dhigooda kiciyey. Warbixinta Cadaani oo isugu jirtey xog waran, guubaabo iyo dhiiri galin ayaa runtii ahayd mid aad iyo aad loogu bogay. Mudane Cadaani wuxuu sawir fiican ka bixiyey awooda JWXO, taageerada shacabka Somalida Ogadeniya u hayaan ONLF iyo jabka iyo halaaga ku dhacay gumeysiga iyo gumeysi kalkaalka. Warbixintii qotoda dheereyd ee Cadaani waxay goobtii shirka ku soo kordhisay farxad iyo jawi deganaansho leh iyada oo wajiyada dadka laga dareemayey farxad xambaarsan rajo wanaagsan mudaddii uu shirku socday.
Sidoo kale wuxuu mudane Cadaani ka shaafiyey xubnihii shirka fadhiyay dhamaan suaalihii ay weydiiyeen.
Dhinaca kale waxaa hadalo kooban oo ku saabsan wanaaga midnimadu leedahay goobta ka soo jeediyey Cali yare, gudoomiyaha jaaliyada Dammam, iyo xubnaha kala ah Siciid gacan, Axmed dhabarlow iyo Sheekh Cabdiraxmaan.
Intaas ka dib waxaa lagu balamay in taageerada halganka la kordhiyo iyo in midnimada bulshada laga shaqeeyo.
Dammam Sacuudi Carabiya